ngomphathi ku 16-02-26
Chengdu uya kwakhiwa kwezinto ezindala iibhetri abakhokelayo-acid kwinkqubo recycling iibhayisikile zombane
ngomphathi ku 14-12-18
"Ulwazi lwezoQoqosho Daily" kumnxulumanisi evela Chengdu City Environmental Protection Bureau, ukuphucula uthungelwano ri, ukuphucula izibonelelo ri zonke iintlobo iindawo, ukuze ungcoliseko kuyehla kube ubuncinane, Chengdu iya kuba kukusekwa kwe elikhokelela acid inkunkuma batteri .. .
Zhengzhou uphando olunzulu lezitenxo isithuthuthu abadala
Ukususela ngoDisemba 15, isebe amapolisa Zhengzhou behlola Kukwaphula scooter esezikhulile endleleni okokuqala ukuba iphande kwaye iwise a ukumiswa isilumkiso isithuthi okanye isohlwayo yethutyana, umqhubi ziya kutshekishwa kwakhona eluvalelweni isohlwayo. Ngentsasa elandelayo, xa wa ...
Imithetho yendlela Mobility Scooters
Ukuze alondoloze ubomi obububo kunye nezizimeleyo, abanye abantu abakhubazekileyo kunye nabantu abadala bathembela ngezithuthuthu ukuhamba ukuhambahamba. Kukho inani lemithetho kwilizwe liphela kwimiba eyahlukeneyo malunga ngezithuthuthu ukulwa. Kubalulekile ukuba Nokukhumbula kwemithetho ndawo kunye nemigaqo uyangenisa ...
Yintoni umahluko phakathi wheelchair zombane & i Isithuthuthu Mobility?
Ngenxa imiba yemfuza, ukwenzakala okanye ukwaluphala, abantu ngamanye amaxesha ziye kuphela ukushukumiseka abayama izixhobo onamavili ukuba ukuhambahamba. Aba bantu kufuneka ukhethe phakathi isitulo esinamavili sombane kunye isithuthuthu ukuhamba. Zombini ezi zixhobo ziya kufumana umntu apho ufuna ukuya kwiimeko ezininzi, kodwa ...
Ngubani na abenzi imoto yemveli imoto ibalulekileyo zombane BMW kuza phezu
Kwiminyaka yakutshanje, eendaba kuye apho kuya kuthi ukuba imarike ekuthengisweni iimoto ezininzi zombane, akukho nto nje ukuba umgaqo ezikhutshwayo-zero California kaThixo (ku-1990, lo mgaqo-nkqubo ufuna ukuba ngamnye izithuthi zero-isidoda ukuveliswa amawaka abenzi ethengisa ca ...
10 Iinzuzo Secret okunexabiso i Electric Bike
inganyanzelekanga Olu luhlu ishicilelwe kwiphepha elingaphambili ngenxa ezininzi okubhalwe kweli bali kukho mfihlakalo. Thina bakhwele Bikes ngok zombane unayo okulungileyo, yaye akunyanzelekanga ukuba wonke ukwazi indlela elungileyo sifika kuyo. Siyakubona ukuba uchulumancile ukuya longele naxa ekhwele iiflethi ...